Latest News | Central Bank of Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် Daiwa Institute of Research Ltd တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Jun 04, 2013 10:33
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် Daiwa Institute of Research Ltd တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ (IT)စနစ် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် Office Computer System တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်သတ်မှတ်သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)နာရီ အချိန်က နေပြည်တော်အမရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Bank Negara Malaysia and the Central Bank of Myanmar sign MOU on Regional Economic and Financial Development
Apr 11, 2013 09:03
Bank Negara Malaysia and the Central Bank of Myanmar signedaMemorandum of Understanding (MoU) today in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, to establishacollaborative frameworktopromote greater regional economic and financial integration. The MoU further enhances economic cooperation and builds towards shared economic prosperity between the two countries.
The MoU also establishesaframework of cooperation for capacity building and human capital development with the support of the Malaysian Technical Cooperation Programme of the Malaysian Government.
နိုင်ငံခြားငွေလက်မှတ်( Foreign Exchange Certificate –FEC) ပြန်လည်ရွေးနုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရ နိုင်ငံခြားငွေလက်မှတ်များ လာရောက်လဲလှယ်အပ်နှံသည့် ဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများနှင့် ငွေလဲကောင်တာများ၏ အမည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း
Mar 30, 2013 17:01
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်
၅၀၀၀/-ကျပ်တန်ငွေစက္ကူအတုနှင့်အစစ်တို့အား အလွယ်တကူ နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြားသိရှိနိုင်သော အချက်အလက်များ
Mar 29, 2013 07:30
Mar 28, 2013 08:50
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၀ ရက်
( ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ် ၂၁ ရက် )
Mar 12, 2013 09:57
Feb 28, 2013 08:02
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများအား နိုင်ငံခြားငွေ များကို ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်စေရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူ ရောင်းချ လဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင် (Money Changer Licence - M.C) ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၁ )ရက်နေ့မှစ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
Feb 19, 2013 06:21
27th SEA GAMES ORGANIZING COMMITTEE
ON SPONSORSHIP MANAGEMENT CONSULTANT
Nov 22, 2012 11:12
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ။)
၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ လ ရက်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လ ရက်
Auction Result for 10.3.2017
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 9.3.2017
Auction Result for 9.3.2017
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 8.3.2017
Auction Result for 8.3.2017
MMK per USD - Date: 7th April 2020
(WA market rate) 1,449.6
Interbank Market WA rate 1,453.8